कुखुराको टाउको बेचेर स्कुल चलाउँदै « paniphoto
« किताब छैन मैले कसरी पढ्नु ? [request byaschool boy] कान्तिपुरले यो ठिक गरेन »	कुखुराको टाउको बेचेर स्कुल चलाउँदै
By -पानीफोटो- on Sunday May 08, 2011	आफ्नो लागि आफैले केहि गर्नु पर्छ । आफ्नो क्षेत्रका लागि आफैले नगरे अरु कसले गर्छ ? यही विचारलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो ठाउँको विकाशका लागि नयाँ नयाँ तरिकाकामा गरिएका सामूहिक प्रयासहरु प्रशस्त छन् । गर्नलाई त हाम्रो देशमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा लिपिबद्ध गरिएको धेरै नै भइसक्यो । तर यो कति कागजी मात्र छ भन्ने कुरा हामीले दैनिक जीवनमा महसुस गरिआएकै छौ । यद्यपी शिक्षाको आवश्यकता भने सबैले महसुस गर्न थालिसकेका छन् । यस्तै शिक्षाको लागि सरकारको मुख नताकि स्थानिय प्रयासमा स्याङ्जामा एक विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरुको मुख्य स्रोत हो, कुखुरा, हाँस, परेवा र बोकाको टाउको बिक्री ।
« किताब छैन मैले कसरी पढ्नु ? [request byaschool boy] कान्तिपुरले यो ठिक गरेन »	5 comments to कुखुराको टाउको बेचेर स्कुल चलाउँदै
· जवाफ दिनुहोस्	एकदम सकारात्मक खबर । खाली मान्छे मरेको र आतकंको समाचार कति सुन्नु ? बाँच्न डर लाग्ने भइसक्यो । ओसामा बिन लादेनको नयाँ नयाँ समाचार खोज्नु भन्दा यस्तो समाचारले समाजलाई फाइदा दिन्छ नि । धन्यवाद लेखका लागि ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	शान्ता अधिकारी
· जवाफ दिनुहोस्	गरे के नहुने रैछ र ? बलीको पैसाले स्कुल चल्नु त अति नै राम्रो हो नि ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	महेश कार्की
· जवाफ दिनुहोस्	तर जुनसुकै कुरामा गरिने बलीको म बिरोधी हुँ । बलीको साटो अर्को उपाय खोज्न मिल्दैन । पशु पनि त इश्वरका पुत्रपुत्री हुन् ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Ishwor Baral
· जवाफ दिनुहोस्	mahesh ji, I dont know god exist or not. But i am sure about that education is the matter which can change human to god.so stop commenting about good thing by giving the name of god.thank you
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	manoj
· जवाफ दिनुहोस्	great news.i appricate it
यही Category बाटलाज पचेपछि ….विधेयकमा आममाफी दिइने भनेर लेखेको तपाई आफुले नै पढेको हो ?माओवादी-मधेसीले घ्याम्पे हान्दै गरेको फोटो सार्वजनिकभागवद् गीतामा साम्यवाद !संविधानसभा निर्वाचन २०७० नतिजा लाइभ अपडेटलाज पचेको, लबस्तरो !!विल ओरेलीलाई खुला पत्र – सुदर्शन सुवेदी ‘त्यो नेपाली मान्छे’ मात्र होइनन्ब्लगर कि अरु केहि ? – आफ्नै कुरा‘वैकल्पिक उर्जालाई बढावा दिऔं’अनि छापियो मुलधारका मिडियामा बेलबारी घटनाको खबर !Online Users6 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार